इरोम शर्मिलाको चट्टानी अडान « Loktantrapost
इरोम शर्मिलाको चट्टानी अडान
२९ श्रावण २०७३, शनिबार ०९:५४
भारतको मणिपुर राज्यकी मानवअधिकारकर्मी इरोम चानू शर्मिलाले आम्र्ड फोर्सेस् स्पेशल पावर एक्ट एएसएफपीए अर्थात सशस्त्र सुरक्षा बल अधिनियम खारेजीको माग गर्दै सुरु गरेको भोकहड्ताल अन्ततः १६ वर्षपछि तोडेकी छिन् । विश्वकै सबैभन्दा लामो भोकहड्ताल तोड्दै गर्दा इरोम शर्मिलाले मणिपुरको मुख्यमन्त्री बनेरै भएपनि राज्यमा लागू गरिएको अधिनियम खारेज गर्ने उद्घोष गरेकी छिन् । १६ वर्षदेखिको भोकहड्तालसँगै शुरु भएको उनको तपस्या अब अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
सन् २००० को नोभेम्बर महिना । मणिपुरको राजधानी इम्फालनजिकैको तुलिहाल विमानस्थलमा आसाम राइफलमा कार्यरत सैनिक जवानले १० जना निहत्था सर्वसाधारणको गोली ठोकेर हत्या गरे । इरोम शर्मिला त्यो घटनाको प्रत्यक्षदर्शी थिइन् । आसाम राइफलका जवानको त्यो नरसंहारले विक्षिप्त बनेकी इरोम शर्मिला सशस्त्र सुरक्षा बल अधिनियम खारेजीको माग राखेर सन् २००० को नोभेम्बर २ तारिखबाट भोकहड्ताल शुरु गरेकी हुन् । र, सन् २०१६ को अगष्ट ९ तारिख मङ्गलबारका दिन इरोम चानु शर्मिलाले मह खाएर अनसन तोडेकी हुन् । यससँगै फेरि एक पटक नै इरोम शर्मिलाले विश्वलाई नै आश्चर्य चकित बनाएकी छिन् । अबको उनको रणनीति के हुन्छ ? १६ वर्षसम्मको भोकहड्ताल र अस्पतालकै कोठामा बनाइएको जेलमा बसेर गरेको तप्बाट प्राप्त शक्तिलाई इरोम चानु शर्मिलाले कसरी प्रयोग गर्छिन्, उनको अबको बाटो त्यही आधारमा तय हुने छ ।
मगङ्लबार अनसन तोडेपछि इरोम शर्मिलाले भनिन् – ‘अबको मेरो बाटो राजनीति हो । म राजनीतिमा आउन चाहन्छु । राजनीतिमार्फत वास्तविक आइरन लेडीको पहिचान बनाउन चाहन्छु । म मणिपुरकी मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्छु ।’ इरोम शर्मिलाले राजनीतिमार्फत चुनाव नै जितेर मणिपुर राज्यको मुख्यमन्त्री बन्ने र सुरक्षा बललाई दिइएको विशेषाधिकार खारेज गर्ने उद्घोष गरेकी छिन् । इरोम शर्मिलामा आत्मबल भरिएको छ । उनमा आव्रmोश ज्वाला छ । आफ्नै आफन्त र आफू जस्तै सर्वसाधारण आँखै अगाडि गोली ठोकेर मारिएको पीडा छ । उनीहरु मारिँदा निस्किएका आवाज र व्रmन्दन अझै मथिङ्गनमा घुमिरहेको छ । तिनका टुहुरा छोराछोरी, विधुवा श्रीमती र छोराछोरीको शोकमा मलिन अनुहार लगाएर बसेका आमाबुबाको झझल्कोले अझै पिरोल्दो हो । त्यसैले इरोम शर्मिला आज कठोर सङ्कल्पका साथ राजनीतिमा अघि बढ्ने उद्घोष गर्दैछिन् ।
इरोम शर्मिलासँग त्यति बेला पनि केही थिएन, जति बेला उनले भोकहड्ताल शुरु गरेकी थिइन् । अहिले पनि उनीसँग केही छैन । छ त केबल डेढ दशकभन्दा लामो समयसम्म गरेको भोकहड्तालबाट प्राप्त नैतिक बल र मणिपुरबासीको समर्थन, जसका लागि उनी १६ वर्षसम्म ज्यानकै बाजी लगाएर भोकहड्तालमा बसिन् । तिनै शान्तिका पक्षधर मणिपुरे नागरिक इरोम शर्मिलाका साथमा छन्, उनीहरु इरोम शर्मिलालाई आफ्नो आवाज मान्छन् । आफ्नो आइडल मान्छन् । यो नै उनको सम्पत्ति हो । यतिसम्म कि मणिपुरका नागरिक शान्तिका पक्षमा, अनि इरोम शर्मिलाका पक्षमा चट्टानी पहाडकै रुपमा उभिएका छन् । इरोम शर्मिला पनि तिनै मणिपुरे नागरिकलाई कुनै किसिमको बन्दुकको त्रासबाट मुक्ति दिलाउन जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण १६ वर्ष भोकहड्तालमै त्यागेकी छिन् ।
सन् २०१२ को अन्त्यतिर भारतीय नेपाली टेलिभिजन च्यानल नेपाल वानमा यो स्पम्भकारलाई विश्व समाचारपछि सुपर न्यूजको जिम्मेवारी आयो । अहिले पनि भारतका उत्तर–पूर्वी ८ राज्यका घटनाक्रमलाई मात्रै समेटेर सुपर न्यूज बजाइन्छ । तर, त्यति बेला मणिपुरका रिपोर्ट थिए – बोरम थोक्सम । प्रायः पौने ७ मा सुपर न्यूज शुरु हुनुभन्दा केही मिनेट मात्रै अघि फोन गरेर भन्थे – ‘इरोम शर्मिला फेरि पव्रmाउ परिन्, ब्रेकिङ न्यूज चलाउनु होला । इरोम शर्मिलामाथिको ज्यादति हामीमाथिको ज्यादती हो । हाम्रो आवाज केन्द्र सरकारले सुनोस् ।’ तत्ःक्षण अरु समाचार छोडेर इरोम शर्मिलाको खबरतर्फ लाग्नु पथ्र्यो । समाचार वा ब्रेकिङ न्यूजका लागिभन्दा पनि त्यहाँका नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्न भए पनि । त्यसैले मणिपुरबासीको इरोम शर्मिलालाई साथ र समर्थन पक्कै दिने छन् ।
इरोम शर्मिला ५ हजार ७ सय ५७ दिनदेखि भोक हड्ताल बसिन् । उनलको जीवन रक्षाका लागि सरकारले नाकमा एउटा नली जोडेर तरल पदार्थ खुवाउने गरेका थियो । इरोम शर्मिलामाथि अनसनकै बेला आत्महत्या गर्न खोजेको आरोप लगाइयो । ४४ वर्षीया इरोम शर्मिलालाई सरकारले न्यायिक हिरासतमा पटक–पटक राख्यो ।
इरोम शर्मिला भोकहड्तालले कमजोर भएकी छिन् । आत्मविश्वास जस्ताको तस्तै छ । सुरक्षा बल विशेष अधिनियममा सुरक्षाकर्मीलाई वारेन्ट गिरफ्तार गर्ने, खोजतलास गर्ने र व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि नियन्त्रण वा नष्ट गर्ने तथा शंकाकै भरमा गोली हान्न अधिकार छ । भारतको मणिपुर राज्यमा सन् १९८० देखि अधिनियम लागू गरिएको छ । अरु राज्यमा पनि यो अधिनियम लागू गरिएको छ । इरोम शर्मिलाले भोकहड्ताल थालेको केही समयपछि नै प्यानल कोड सेक्सन ३०९ का आधारमा आत्महत्या प्रयास मुद्धा लगाइएको थियो । उनी गिरफ्तारमा परिन् । जेलमै कयौँ दिन बिताउनु पर्यो । धरौटीमा छोडिएपनि उनले अनशन तोड्न अस्वीकार गरिन् । नयाँ दिल्लीको जन्तरमन्तरमा पनि अनशन बसिन् । सन् २००७ मा मणिपुरमा फर्किएपछि उनलाई गिरफ्तार गरियो । सन् २००७ कै अप्रिलमा १ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार राशीको जिवाङ्जु प्राइज फर ह्युमन राइट्सबाट उनलाई सम्मान गरियो । इरोम शर्मिलाले पुरस्कारको रकम मणिपुरमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताबाट शिकार भएकाहरूलाई चन्दा दिएको पत्रकार थोक्सम बताउँछन् । सन् २०१० मा रवीन्द्रनाथ ठाकुर शान्ति पुरस्कार र एशियाली मानव अधिकार आयोग पुरस्कार पाइन् । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले उनलाई सन् २०१३ मा ‘विवेकको कैदी’को उपमा दिएको छ । उनी कबिता पनि लेख्छिन् । उनका कबितामा बन्दुकको दमनको विरोध हुन्छ । शान्ति र अमनचयनयुक्त समाजको तस्वीर हुन्छ । उनी लेख्छिन् –
जब सकिएला जीवन
कृपया मेरो जीऊलाई बोकेर
बाबु कोउबु्रको माटोमाथि
आगोका ज्वालामा झोसेर
मेरो देहलाई खत्तम गर्न
बञ्चरोले चिरा–चिरा चिरेको सोचेर
मेरो मन भरिन्छ घृणाले
बाहिरी आवरण त आफै सुक्ला नि
बरू यो देह कुहियोस् माटोभित्रै
बरू आउने पुस्ताको निम्ति यो केही काम लागोस्
बरू फेरियोस् खनिज पदार्थमा यो
फैलाउनेछु म शान्तिको बासना
मेरो जन्मभूमि काङ्लेइबाट
जसले ढाक्नेछ संसारै ।
प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले भर्खरै अनसन तोड्दै भनेका थिए – ‘अहिलेसम्म नखाई आन्दोलन गरे । अब खाएर आन्दोलन गर्छु ।’ प्रा.डा. केसीको यो चेतावनी हजारौँ शब्दभन्दा बढी छ । भ्रष्ट सत्ताधारीहरुका लागि यो एउटा ठूलो विनासको सङ्केत हो । इरोम शर्मिलाको भोकहड्तालको अन्त्य गर्ने निर्णयले पनि शान्तियात्रालाई र शान्तिपूर्ण मणिपुर निर्माण गर्न उज्यालो आभाको काम गरेको छ । सन् १९७२ मा जन्मिएकी इरोम शर्मिलाको अबको यात्रा कठिन भएपनि उनको लक्ष्य असम्भव छैन । जुन उर्जा र एजेण्डाका साथ उनी अघि बढ्दैछिन् । अवश्य पनि उनी सफल हुन्छिन् । कानुनी प्रव्रिmया अनुरुप इरोम शर्मिलालाई १५ दिनमा एक पटक अदालत लगिन्थ्यो । उनले पछिल्लो पेशीमा सशस्त्र सुरक्षा बल अधिनियम विरुद्धको लडाईमा विजयी हुन फरक बाटो अपनाउने घोषणा गरिन् । र, प्रव्रिmया फरक भएपनि इरोम शर्मिलाका संघर्ष पाइला निरन्तर अघि बढिरहने छन् । शान्तिका लागि इरोम शर्मिलाले लिएको चट्टानी अडान प्रेरक छ । आगामी आन्दोलन सफल होस्, इरोम शर्मिलालाई शुभकामना ।
(२०७३ साउन २९ गते लोकतन्त्र पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित)
पुरातत्व विभागले अवलोकन गर्यो पातलगंगा घैलाडुब्बा मन्दिर
मेचीनगर, १० भदौ । पुरातत्व विभागले मेचीनगर–५ र ८ मा स्थित पातलगंगा तथा घौलाडुव्वा मन्दिर परिसरको अवलोकन गरेको
स्थानीयको गुनासो : झरनामा पर्यटक बढेसँगै पानी दूषित
बाहुनडाँगी, ५ भदौ । मेचीनगरको साविक बाहुनडाँगीका खानेपानी उपभोक्ताहरुले झरनामा नुहाउन आउने आन्तरिक पर्यटकका कारण आफूहरु दूषित पानी
मेचीनगरका व्यवसायीले मंगलबारदेखि व्यवसाय खोल्ने
मेचीनगर, ३१ साउन । मेचीनगरमा आउँदो भदौ १ गतेदेखि व्यवसायीले सबैखाले व्यापार व्यवसाय खोल्ने घोषणा गरेका छन ।
‘चार महिनाको छोरो अस्पतालले बन्धक बनायो, म के गरुँ ?’
झापा, २४ साउन । उपचार खर्च तिर्न नसक्दा भारत पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडीस्थित पारामाउन्ट हस्पिटल (नर्सिङ होम)ले मेचीनगर नगरपालिका
गन्धर्वको पीडा : रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने भइयो
।। अम्बिका भण्डारी ।। झापा, २० जेठ । देशका विभिन्न कुना कन्दरासम्म पुगेर सारङ्गीको धुनमा गीत गाएर परिवार
खरवुजा, मेवा र कागती बारीमै कुहिए (फोटो फिचर)
मेचीनगर, ४ जेठ । लकडाउनका कारण दश विगाहा क्षेत्रफलमा लगाईएको खरवुजा, कागती र मेवा बारीमानै कुहिन थालेको छ